China Silicone Foley Catheter miaraka amin'ny mpamokatra Temperature Probe sy mpamokatra | Kangyuan
Fonosana: 10 pcs / boaty, 200 pcs / baoritra
Haben'ny boaty: 52x34x25 cm
Fampiasana fanahy iniana
Izy io dia ampiasaina amin'ny catheterization urethral klinika mahazatra na ny urethral drainage ho an'ny fanaraha-maso tsy tapaka ny mari-pana amin'ny mararin'ny marary amin'ny monitor.
Ity vokatra ity dia voaforon'ny kateteran'ny urethral sy ny fizahana ny mari-pana. Ny catheter fitetezana urethral dia misy vatan'ny catheter, balaonina (sac sac), lohany mpitari-dàlana (tendrony), interface lumen drainage, interface lumen famenoana, interface lumen mandrefesana mari-pana, interface lumen flushing (na tsia), pluging lumen (na tsia) ary rivotra valizy Ny famotopotorana momba ny maripana dia misy famotopotorana momba ny maripana (puce termal), interface interface ary fifangaroan'ny tariby fitarihana. Catheter ho an'ny ankizy (8Fr, 10Fr) dia mety ahitana tariby tariby (tsy voatery). Ny vatan'ny catheter, lohany mpitari-dalana (tendrony), balaonina (sac rano) ary ny interface lumen tsirairay dia vita amin'ny silipo; ny valva-drivotra dia vita amin'ny polycarbonate, plastika ABS ary polypropylene; ny plug flushing dia vita amin'ny PVC sy polypropylene; ny tariby mpitari-dalana dia vita amin'ny plastika PET ary ny famotopotorana momba ny mari-pana dia vita amin'ny akora PVC, fibre ary vy.
Ity vokatra ity dia miaraka amin'ny thermistor izay mahatsapa ny mari-pana fototry ny tatavia. Ny refy fandrefesana dia 25 ℃ hatramin'ny 45 ℃, ary ny mari-pahaizana dia ± 0.2 ℃. 150 segondra mandanjalanja fotoana tokony ampiasaina alohan'ny fandrefesana. Ny tanjaka, hery fisarahana mpampitohy, fahamendrehana balloon, fanoherana miondrika ary tahan'ny fikorianan'ity vokatra ity dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fenitra ISO20696: 2018; mahafeno ny fepetra takian'ny electromagnetic mifanentana amin'ny IEC60601-1-2: 2004; mahafeno ny fepetra fiarovana amin'ny herinaratra an'ny IEC60601-1: 2015. Ity vokatra ity dia voadio sy voahitsakitsaky ny oxygène etilène. Ny habetsaky ny oksida etilena sisa dia tokony latsaky ny 10 μg / g.
Lahatsoratra / famaritana
Kaody loko miloko
Famaritana frantsay (Fr / Ch)
Ny savaivony ivelany an'ny savaivony (mm)
lumen faharoa, lumen fahatelo
Lumen faharoa, lumen fahatelo, lumen miverina
1. Fanosorana diloilo: tokony hosorana menaka fanosotra ara-pahasalamana ny catheter alohan'ny fampidirana azy.
2. Fampidirana: ampidiro ao anaty uretra ao anaty tatavia ny catheter lubricated (esorina ny urine amin'izao fotoana izao), avy eo ampidiro ny 3-6cm ary ataovy tafiditra ao anaty tatavia tanteraka ilay balaonina.
3. Rano mitobaka: Mampiasà syringe tsy misy fanjaitra, manondroa balaonina misy rano madio tsy madio na vahaolana misy rano 10% glycerine. Ny volavolan-dalàna tokony hampiasaina dia voamarika amin'ny fantson'ny kateter.
4. Famarana ny maripana: raha ilaina dia ampifandraiso ny atin'ny faran'ny ivelany amin'ny fizahana ny mari-pana amin'ny faladian'ny monitor. Ny maripanan'ny mararin'ny marary dia azo arahi-maso amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny angona asehon'ny monitor.
5. Esory: Rehefa esorina ny catheter dia esory aloha ny interface ny tsipika mari-pana amin'ny monitor, ampidiro ny syringe tsy misy fanjaitra ao anaty valve, ary sotrohy ny rano steril ao anaty balaonina. Rehefa manakaiky ny an'ny tsindrona ny habetsaky ny rano ao amin'ny syringe dia azo esorina tsimoramora ny catheter, na azo esorina ny vatan'ny fantsom-batana hanala ilay catheter aorian'ny fanosehana haingana.
6. Fonenana: miankina amin'ny filan'ny klinika sy ny fitakiana fikarakarana ny fotoana onenana, fa ny fotoana ipetrahan'ny be indrindra dia tsy tokony hihoatra ny 28 andro.
1. urethritis maranitra.
2. Prostatite mahatsiravina.
3. Ny tsy fahombiazan'ny fampidirana am-bava ny valanoranon'ny pelvika sy ny ratra amin'ny urethral.
4. Ireo marary heverina fa tsy mety amin'ny mpitsabo.
1. Rehefa manosotra ny catheter dia aza mampiasa menaka misy substrate-menaka. Ohatra, ny fampiasana menaka parafin ho solika dia hiteraka vaky balaonina.
2. Ny haben'ny katetika samy hafa dia tokony hofidina arakaraka ny taona alohan'ny hampiasana azy.
3. Alohan'ny hampiasaina dia zahao raha totoafo ilay catheter, na mitete ny balon na tsia, ary raha tsy voasakantsakana ny suction. Aorian'ny fampifandraisana ny plug -n'ny famotopotorana ny mari-pana amin'ny monitor, na tsy ara-dalàna na tsia ny angona aseho.
4. Azafady mba jereo raha tsy ampiasaina. Raha misy vokatra (fonosana) tokana hita fa misy ireto fepetra manaraka ireto dia voarara tanteraka ny fampiasana:
A) mihoatra ny vanim-potoana lany datin'ny fanafohezana;
B) ny fonosana tokana amin'ny vokatra dia simba na misy raharaham-bahiny.
5. Ny mpiasan'ny mpitsabo dia tokony handray andraikitra malefaka mandritra ny fampidirana am-paty na fikolokoloana, ary hikarakara tsara ny marary amin'ny fotoana rehetra mandritra ny catheterization hipetraka mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana.
Fanamarihana manokana: rehefa mijanona ao aorian'ny 14 andro ny fantsona fisotrony, mba hialana amin'ny fantsona dia mety hivoaka noho ny volatilization ara-batana amin'ny rano tsy misy fangarony ao anaty balaonina, ny mpitsabo dia afaka mampiditra rano sterile ao anaty balaonina ao anatin'ny indray mandeha. Ireto ny fomba fandidiana: tazomy amin'ny fitanana ny fantsona fisotrony, sintomy avy ao anaty balaonina ny rano tsy misy fangarony, avy eo atsofohy ao anaty balloon ny rano arakaraka ny fahaizan'ny nominal.
6. Atsofohy ao anaty lakan-drano fandefasana catheter ho an'ny ankizy ny tariby fitarihana ho fampidirana an-tsokosoko. Azafady azafady azafady ny tariby mpitari-dalana aorian'ny fampidirana.
7. Ity vokatra ity dia voahitsakitsaky ny volo etylômanina ary manana vanim-potoana manan-kery mandritra ny telo taona hatramin'ny daty namokarana.
8. Ity vokatra ity dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana klinika, ampiasain'ny mpiasan'ny fitsaboana ary rava aorian'ny fampiasana azy.
9. Raha tsy misy fanamarinana, dia hialana amin'ny fampiasana azy amin'ny fizahana scanning ny rafitra resonansa andriamby nokleary hisorohana ny fitsabahana mety hitranga izay mety hitarika amin'ny fandrefesana mari-pana tsy marim-pototra.
10. Ny fivoahan'ny onja an'ny marary dia refesina eo anelanelan'ny tany sy ny thermistor amin'ny 110% amin'ny sandan'ny volan'ny tambajotra avo indrindra.
Fampianarana ny Monitor
1. Ny monitor monitor multi-parameter (modely mec-1000) azo atolotra ho an'ity vokatra ity;
3. Ity vokatra ity dia mifanaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso ny mari-pana YSI400.
Torohevitra fampifanarahana elektromagnetika
1.Ity vokatra ity sy ireo fitaovana fanaraha-maso mifandraika dia tokony hitandrina manokana momba ny mifanentana amin'ny electromagnetic (EMC) ary hapetraka sy hampiasaina mifanaraka amin'ny fampahalalana momba ny fifandrifiana elektromagnetika voalaza ao amin'ity torolàlana ity.
Ny vokatra dia tsy maintsy mampiasa ireto tariby manaraka ireto hamaly ny fepetra takian'ny emission electromagnetic sy ny anti-interferensi:
2. Ny fampiasana kojakoja, sensor ary tariby ivelan'ny faritra voafaritra dia mety hampitombo ny famoahana elektromagnetika ny fitaovana sy / na hampihena ny hery fiarovan'ny electromagnetic an'ireo fitaovana.
3. Ity vokatra ity sy ny fitaovana fanaraha-maso mifandraika dia tsy azo ampiasaina akaiky na mifangaro amin'ny fitaovana hafa. Raha ilaina dia atao ny mandinika akaiky sy manamarina fa azo antoka ny fiasan'ny mahazatra amin'ny fikirakirana ampiasaina.
4. Rehefa ambany kokoa ny amplitude signal input raha oharina amin'ny amplitude farafahakeliny voalaza ao anaty ny pitsopitsony teknika, dia mety tsy marina ny fandrefesana.
5. Na dia manaraka ny fepetra takian'ny CISPR aza ny fitaovana hafa, dia mety hiteraka fanelingelenana ireo fitaovana ireo.
6. Ireo fitaovana fampitana finday sy finday dia hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny fitaovana.
7. Fitaovana hafa misy emission RF mety hisy fiatraikany amin'ny fitaovana (oh: finday, PDA, solosaina misy fiasan'ny tariby).
Teo aloha: Lignngeal Mask Airway ho an'ny fampiasana tokana
Manaraka: Catheter Foley Silicone 2 Way miaraka amin'i Tip Tiemann
kateter miaraka amin'ny famotopotorana momba ny maripana
catheter misy sensor amin'ny mari-pana
kateter fole miaraka amin'ny famotopotorana momba ny maripana
kateter foley miaraka amin'ny sensor sensor
silety kateter miaraka amin'ny famotopotorana momba ny maripana
silety catheter miaraka amin'ny sensor sensor
silipo foley catheter miaraka amin'ny famotopotorana ny mari-pana
silety foley catheter misy mari-pana sensor
mari-pana silikera sensig mari-pana
catheter mahatsapa mari-pana
mari-pamantarana hafanana catheter foley
mari-pamantarana hafanana silety foley catheter
mari-pana mahatsapa kateter urethral
catheter hafanana sensinh foley
kateter uretra miaraka amin'ny famotopotorana momba ny maripana
kateter urethral miaraka amin'ny sensor sensor
catheter urinary misy famotopotorana momba ny maripana
catheter urinary miaraka amin'ny sensor sensor
Catheter Foley Silika Miaraka amin'ny Temperatur ...